Ixesha elide, icandelo lemveliso lilumke kakhulu malunga nokusetyenziswa kwearhente yangaphakathi yokukhutshwa kwesilicone. Oku kunokuba nento yokwenza nokuqonda okwahlukileyo kunye nokusetyenziswa kwemveliso
Kukho ukungaqondani okuninzi malunga ne-arhente yokukhupha kwi-silica gel
Nye. Kwimpembelelo yento eprintiweyo, kulula ukubangela ukwanda kwamaxesha okushicilela.
Mbini. Lungiselela iimveliso zokubopha iimethi zomgangatho, zikhokelela kubambelelo olubi.
3. Ukubonakala kwemveliso kulula ukuvelisa amabala aqaqambileyo ngaphezulu.
4. Kulula ukubangela iqabaka.
Ngenxa yokulahlekisa kwabantu ngasentla bahlala beliphosa ithuba, ngenxa yoloyiko kwaye ayisasebenzi, okukhokelela ekusebenzeni kakubi kwearhente yokukhutshwa kwe-silicone ayinakusebenza. Ngapha koko, ukusetyenziswa kwexesha elide kwearhente yokukhutshwa kwangaphakathi kuya kwenza ifilimu yokuhambisa ubunzima obunzima ekukhanyeni, kwaye imveliso kulula ukuyidiliza, ngakumbi kwiimveliso ze-silicone ekunzima ukuyidiliza. Ukusetyenziswa kakuhle kwearhente yokukhutshwa kwangaphakathi kuluncedo kakhulu ekuphuculeni ukusebenza kwemveliso, kodwa ixesha alikho lifutshane, uvavanyo lufuna ixesha elifanelekileyo lokuthelekisa.
Le miba ilandelayo kufuneka yenziwe kakuhle xa usebenzisa i-arhente yangaphakathi yokukhutshwa komngundo ukumisela iinkcukacha:
Nye. Ukhetho lwe-silica gel izinto ezingafunekiyo akufuneki lunyoluke ngexabiso eliphantsi. (izinto ezingabizi kakhulu, nokuba akukho ngxaki ngezixhobo, zinokungazinzi ngenxa yokuphefumla okufutshane kunye nexesha lokulungisa.)
Ukukhethwa kwearhente ye-disulfide kufuneka kuchanekile, kokukhona uzinzo (kukho ezinye izinto ezinobunyulu obusezantsi, imveliso iphekwe ngokukhawuleza, ngcono, kodwa ukuzinza kokukhona kulunge)
3. Sukuzibaxa izinto. (ngenxa yesiqulatho esaneleyo sesalfure kwimveliso, ngakumbi ukhetho lwearhente ekhawulezayo yokunyanga, umphezulu ulunge kakhulu. Ukuxobuka.)
4. Sebenzisa imali efanelekileyo. (ngumncedisi kuphela, hayi eyona ndima iphambili. Ukusetyenziswa okufanelekileyo kwezinto ezingavunyelwanga, izinto ezincedisayo kunye netekhnoloji yokulungisa iya kubonisa ixabiso layo.)